एउटा जिज्ञासा बाँकी नै थियो डाक्टर साहेब! डा. भम्पा राई शरीर बिसाउन भुटानै फर्कन चाहन्थे। उनको यो इच्छा त पूरा भएन, तर भुटानमा मानव अधिकारको कुरा उठ्नासाथ उनको वैचारिक अडान सधैं मानकका रूपमा रहिरहनेछ।
निकुञ्जले थिचिएका आदिवासी जङ्गल र जनावरलाई एकातिर अनि पुस्तौंदेखि तिनको रेखदेख गर्दै आएका आदिवासीलाई अर्कोतिर पारेर सही अर्थको संरक्षण हुन सक्दैन।
उम्मेदवारलाई सोधौं‚ तपाईंको ग्रीन एजेन्डा के छन्? एक राजनीतिकर्मीमा पर्यावरणीय चेतना भए मात्र उसले पर्यावरण संरक्षण तथा सुधारका नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ। त्यसैले मतदाताले आफ्ना क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई ‘तिम्रा ग्रीन अजेन्डा के छन्?’ भनी प्रश्न गर्नुपर्छ।
किशोरावस्था र लोकप्रियताको लोभ किशोरकिशोरीलाई लोकप्रिय बनाउने लोभ देखाएर कसैले झुक्याइरहेका पो छन् कि? यसबारे सोच्नुपर्ने भएको छ।
भाइरल तस्वीरको भित्री कथा सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउनुतर्फ भन्दा भ्यूटावर निर्माण जस्ता अनावश्यक काममा जोड दिंदा दुर्गमका आमाहरू बाटोमै बच्चा जन्माउन बाध्य मात्रै छैनन्, ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा छुटाउनै नहुने १२ विषय नेपाल-भारत सम्बन्धमा पर्दै गएको गाँठो फुकाउन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस पटकको भारत भ्रमणमा केही विषय गम्भीरताका साथ उठाउनै पर्छ।
पत्रकार महिलाका चुनौती: सहकर्मीबाटै दुर्व्यवहार! पत्रकारले जबसम्म आफूलाई सुरक्षित भएको महसूस गर्दैन तबसम्म उसका अक्षर निडर हुन सक्दैनन्।
दिवंगत लाइब्रेरी, केही लेखक लाइब्रेरी मन्दिर हो, तर यसले मन्दिरले जसरी यही नै सत्य हो भन्ने जिद्दी गर्दैन। चूपचाप सके जति ज्ञान पस्कन्छ र विद्यार्थीलाई आफ्नो धारणा चयन गर्न स्वतन्त्र छोडिदिन्छ।
सिटामोल ब्युँताउने नवीन्द्र दाइ नवीन्द्र दाइसँग जनसम्पर्क गर्ने कला पनि बेजोड थियो। राजनीति गर्छु भन्नेसँग हुनुपर्ने पहिलो र अपरिहार्य गुण नै त्यही हो।
व्याख्यात्मक टिप्पणी, कपडा र गोबर घरपरिवार वा जनताको मनोरञ्जनका लागि वेलावेलामा ढुङ्गामुढा र विवाद भइरहनु जरुरी छ र थप मनोरञ्जनका लागि जरुरी छ एक थान ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’।
महिलामाथि सय वर्षअघिको जस्तै विभेद महिला भएकै कारण सय वर्षअघि मेरी हजुरआमाले जस्तो विभेद र समस्या खेपेकी थिइन्, मैले नेपालमै बस्ने गरी विदेशबाट फर्केर आएपछि अहिले पनि त्यस्तै विभेद र समस्या खेप्नुपर्‍यो।
‘बालबच्चासँग खेलेको, स्कूल पुर्‍याएको खूब याद आउँछ’ साउदीबाट बुबाले एउटा चिठीमा लेख्नुभएको थियो, ‘यदि मैले पढे-लेखेको भए, आज यो ठाउँमा आएर माली भएर काम गर्नुपर्ने थिएन। मेरो पदोन्नति पनि हुनेथियो, तर मालीको कुनै पदोन्नति नहुने रहेछ। त्यसैले तिमीहरूले पढ्नु जरुरी छ।’
टिम्मुर, रुद्राक्ष र गुलुप यो ‘सानो’ लेखोटमा कौनो ‘ठूलो’ बात भन्न खोजेको होइन। बस्, यति भन्न खोजेको हो- तपाईंको राशि हात्ती चढ्नेसित मिल्दैमा तपाईंको राशिफलमा धुरी चढ्न पाइन्छ भनेर लेखिएको नहुन सक्छ।
मृत्यु पर्खिंदाको त्यो क्षण रातको १२ बजे नाडीको चाल रोकियो भनेर डाक्टरले जानकारी गराए। तैपनि काकी बाँच्नुहुन्छ कि भन्ने आशा मनमा जीवितै थियो, त्यसैले ‘अझै कोशिश गरिदिन’ रुँदै अनुरोध गरें। तर, डाक्टरको आँखाले भने ‘उहाँ अब यो दुनियाँबाट टाढा जाँदै हुनुहुन्छ’ भन्ने सङ्केत गर्दै थियो।
कसरी सम्बाेधन गर्ने सडक मानवको समस्या? सामान्य जस्तो लागे पनि सडक मानवको व्यवस्थापन अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो, यसको समाधानका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारले वैकल्पिक बाटो अपनाउन जरुरी छ।
‘सङ्गीतकी सरस्वती’ को अवसान प्रत्यक्ष लतालाई नभेटे पनि सङ्गीतकी सरस्वती मानेर तस्वीरमा पूजा गर्थ्यौं, तर अब त झन् तस्वीरमै पूजा गर्नुपर्ने भयो।
हिंडाइको मानवशास्त्र हिंड्नु भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ/गन्तव्यमा पुग्नु मात्र होइन, त्यो यात्राको बीचमा रहेको हावापानी, माटो, जीवजन्तु र मानवबीचको संवाद पनि हो।
रामझुपडी, जोकर र सजिलो हरेक दशैंमा बाआमा नातिनातिनालाई आशीर्वाद दिंदै भन्छन्, “तिमीहरू पनि बा जस्तै क्रान्तिकारी बन्नू। क्रान्ति त नगदेबाली हो। भजाउन सजिलो, बेच्न पनि सजिलो।”
संसारमा लम्केका र छुटेका नेपाली विदेशमा हुर्केका सन्ततिले हाम्रो सेखपछि छुट्टी मनाउन यूरोप, अमेरिका वा मध्यअमेरिका ताक्लान्, तर नेपाल ताक्दैनन्। हाम्रो पो नेपालमा बाआमा छन्, साथीसँगी छन्। जन्मेको घर र हुर्केको आँगन छ।
झोला, समय र रातारात म चकित थिएँ। मलाई झन् चकित पार्दै हिजोसम्म ऊर्जावान् युवा अहिले काँपेको स्वरमा भनिरहेका थिए, “राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अब जनमत सङ्ग्रह गर्नैपर्छ।”
जसको मृत्युले हङकङेली नेपाली समुदायलाई शोकमा डुबायो किसन राईको निधनले हङकङको नेपाली समुदाय अभिभावक गुमाएको टुहुरो जस्तै बनेको छ। यो क्षतिको भर्पाई हुन कठिन छ।
इलाममा बोलेरो दुर्घटना, तीन यात्रुको मृत्यु इलाममा आइतबार बोलेरो दुर्घटना हुँदा तीन यात्रुको मृत्यु भएको छ।
सर्वोच्चले हटायो हेटौंडा-बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्त्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुई वटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटेको छ।
सामान्य वर्षामै भासियो चार करोडको शपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क चार करोड खर्च गरेर निर्माण गरिएको शपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क उद्घाटन भएको चार महीनामै भासिएको छ।
व्यापार घाटा १६ खर्बको छेउछाउ, तीन खर्ब ५६ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात
आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत जेठमा फेरि आयात उकालो चढेको छ।